WAR LA SUGAYAY: Pep Guardiola Oo Kaddib Heshiis Kordhintii Uu Sameeyay Si Cad Uga Hadlay Haddii Uu Lionel Messi Keenayo Man City – Laacibnet.net
WAR LA SUGAYAY: Pep Guardiola Oo Kaddib Heshiis Kordhintii Uu Sameeyay Si Cad Uga Hadlay Haddii Uu Lionel Messi Keenayo Man City
November 21, 2020 Apdihakem Omer Adam
Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa si cad uga hadlay haddiiba uu kabtanka Barcelona ee Lionel Messi keenayo gegida Etihad Stadium kaddib markii uu dhawaan heshiis cusub u saxeexay kooxdaas.
City ayaa si weyn loola xidhiidhinayay Messi kaddib markii uu xiddiga dhalasho ahaan kasoo jeeda Argentina shaaciyay rabitaankiisa ah inuu doonayo inuu iskaga baxo kooxdii uu 20-ka sano kasoo tirsanaa.
Walow uu 33 sano jirkaasi ka laabtay go’aankiisii hore haddana City ayaa wali baaqi ku ah xiisaha ah inay la saxeexato waxaana ay kor u qaadi doonaan rabitaankooda ah inay helaan kaddib markii uu Pep laba sano oo kale saxeexay.
Guardiola oo ka hadlay xaalada Messi markii ugu horreysay tan iyo heshiis kordhintiisii ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu Messi waayihiisa ciyaareed ku dhammaysto Barca balse diiday inuu meesha ka saaro inay la saxeexan karaan kaddib qandaraaskiisa oo dhammaadka xilli ciyaareedkan ku eeg.
“Isagu waa ciyaaryahan Barcelona ka tirsan, haddii aad aragtidayda i weydiiso anigu abaal badan ayaan uga hayaa Barcelona wixii ay ii qabatay” ayuu ugu horreynba yidhi macalinka Sky Blues.
“Iyagu waxay aniga i siiyeen waxkasta sidaas darteed waxaan doonayaa in isagu (Messi) ku dhammaysto waayihiisa ciyaareed halkaas, malaha kun jeer ayaan idhi Leo haku dhammaysto waayihiisa ciyaareed halkaas, laakiin isaga hal sano oo uu dhammaysto ayaa u hadhsan mana garanayo waxa maskaxdiisa ka dhacaya”